Igumbi lokulala eli-3 elithandekayo ukufikelela ngqo kwiTrail kunye neLake
Ikhaya elitofotofo kakhulu kwaye licocekile elinamagumbi amathathu okulala. Akukho trailer efunekayo ukuze ufike kwi-snowmobile okanye i-ATV trail. IBergland yindawo yomzila kwaye ungaya kwiindlela ezi-4 ezahlukeneyo. Ifakwe kwiibhloko ezi-4 ukusuka kwiLake Gobebic isikhephe sokuLaunch. Yiba neevenkile ezi-2 edolophini ezinegrosari, igesi kunye ne-sprits. Sibekwe embindini we-Indianhead kunye neenduli zePorcupine Ski kwaye sivale iLake Superior. Eli khaya linazo zonke izibonelelo onazo ekhaya. Zisa nje izinto zakho zobuqu kunye nezinto zakho ezilungileyo ukuba uhambe.
Ikhaya lethu leeholide lipeyintwe ngaphakathi nangaphandle. Inegumbi lokutyela elikhulu ukuhlalisa lonke iqela. Inedekhi, i-Charcoal Grill kunye ne-firepit ephathwayo ene-grate yokugcoba. Zininzi izinto esinokuzenza ehlotyeni, ekwindla nasebusika. Yiza udlale emanzini, ukhwele ii-ATV zakho kwihlathi lethu lesizwe elikufutshane nazo zonke iimbono zalo ezikhethekileyo kunye nezilwanyana zasendle. Yiza ubone imibala ekwindla edlamkileyo. Ebusika zisa isileyi sakho kwaye ukonwabele ukukhwela kumakhulu eendlela ezilungiswe kakuhle ekufuneka sizinike. Xa ungadlali kwiNgxobhozo, Amanzi okanye Ikhephu khangela iiNgxaki zaManzi kwindawo.
IBergland yidolophu encinci enabantu abanobuhlobo abazixabisayo izipho zakho. Kukho iindawo zokutyela ezininzi, isikhululo segesi kunye nevenkile eluncedo engaphaya kwesitalato. Sine-ofisi yeposi kunye neBar ngqo endleleni. Iintaba zePorcupine zikude ngemizuzu engama-20.
Asikho kude kwelikhaya, ukuba uyasidinga siyafumaneka.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bergland